रिपोर्टर्स नेपाल « रिपोर्टर्स नेपाल
एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले जोखिम निम्त्याउँछ
काठमाडौं । के तपाईंले चिकित्सकसँगको परामर्शबिनै एन्टिबायोटिक औषधि सेवन त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो हो भने सावधान ! चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा
संवैधानिक आयोगमा ३९ पद रिक्त
काठमाडौं,मंसिर १० । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन्। संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू सबैमा पद
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात सुरु
काठमाडौं,मंसिर १० । पश्चिमी वायुको प्रभावले मुलुकभर चिसो बढेको छ। अरेबियन सागर र भारतको जम्मुकास्मिर हुँदै भित्रिएको जलवाष्पयुक्त वायुको प्रभावले उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात सुरु भएको छ। सोमबार
राजस्व छल्ने काइदाः मजदुरको नाममा नक्कली फर्म
काठमाडौं,मंसिर १० । राजस्व छल्ने कार्य नियन्त्रणका लागि आक्रामक रूपमा अघि बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागले झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करभ्याट बीजक प्रयोग गरी १ अर्ब २९ करोड ३६ लाख
आँखाको शल्यक्रियाका कारण सन्दीपले साग गुमाउने
काठमाडौं – आँखाको शल्यक्रियाका कारण नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा अर्को साताबाट सुरु हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गुमाउने भएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका म्यानेजर रमन शिवाकोटीले
लोभ देखाएर कोठीमा पुर्‍याइन्छन् महिला
काठमाडौं – सिन्धुलीकी २५ वर्षीया लक्ष्मी (नाम परिवर्तन) लाई चिनेजानेकै एक व्यक्तिले आठ महिनाअघि जागिरको प्रलोभन देखाए। उनले भने, ‘भारत जाऔं, नयाँ दिल्लीमा। इलेक्ट्रोनिक्स अफिसभित्र अकाउन्टेन्टको काम लगाइदिन्छु।’ नजिकका मान्छेले
ट्य्राकपछि फुटबल मैदान मार्किङ
पोखरा,मंसिर ९ । पोखरा रंगशालाभित्र पूर्वाधार निर्माणको चटारोले अझै छाडेको छैन। १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने काम धमाधम हुँदै छ। समय निकै कम छ। यद्यपि मैदानसहित प्यारापिटको
जेल जान तयार हुन शिक्षामन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं,मंसिर १० । निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको समयसीमाको मंगलबार अन्तिम दिन हो। शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निजी मेडिकल
गरिव बालिकाको भाइरल तस्विरले दियो शिक्षा
काठमाडौं, मंसिर ९ । दक्षिण भारतको हैदराबादमा अवस्थित एउटा विद्यालयमा खिचिएको एउटा तस्बिरले केही हप्ताअघि ठूलो चर्चा पायो। एउटी पाँच वर्षीया दिव्या नाम गरेकी बालिकाले उक्त तस्बिरकै कारण विद्यालयमा भर्ना
‘रोड रोलर’ दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
काठमाडौं, मंसिर ९ । सोमबार बेलुका गोकर्णेश्वरमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलमा ड्याम बनाउने क्रममा आइतबार बा३क ६३८ नम्बरको रोलर सडकबाट तल खस्दा
वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीलाई नै ज्यानमार्ने धम्की आएपछि
कोलम्बो,मंसिर ९ । श्रीलङ्कामा उच्च दर्जाका अधिकारीहरूको मुद्दा अनुसन्धान गर्दै आएका अधिकारीलाई ‘ज्यान मार्ने धम्की’ आएको भन्दै वरिष्ठ गुप्तचर अधिकृत भागेको प्रहरी र सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पछिल्लो समय सरकारमा
दिल्लीको कोठीमा बेच्न लागेका दुई महिलाको उद्धार
काठमाडौं, मंसिर । माइती नेपालको भारत शाखाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको कोठीमा बेच्न लागेको अवस्थामा दुई नेपाली महिलाको उद्धार गरेको छ । राम्रो काममा लगाइदिने भनी काभ्रेपलाञ्चोक र झापा घर